Business Bazaar For Youths | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Business Bazaar For Youths
Posted on December 8, 2017 by MYEO in Events, Local, youth opportunities //0Comments
Registration Deadline : 15th December(until 12 o’clock at night)
Location : Yuzana Hotel(Business Center Room),130 Shwegondine Rd,Yangon
Duration : 12PM to 4:30PM
Type : Free for all
Registration Link : M-LINK Business Bazaar Registration
This event is organized by M-LINK and everyone can attend free without any fees.Business Bazaar for youths is an event which is planned for the university students to meet the professionals from various business fields in Myanmar and foreign country.The post-graduated students can haveachance to study how they are working in companies.This event creates an opportunity for youths especially to meet the businessmen from various fields in Myanmar.You can study their experiences and the job options.The company will give you the chance how companies are going on.You will get the experience and knowledge to prepare before getting into the real working conditions.
Please visit M-Link’s Facebook page for more information.
ဒီပွဲ​လေးက​ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသား/သူ​တွေနဲ့ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းခွင်​က လုပ်​ငန်း​​အ​တွေ့အကြုံရှိတဲ့ လက်​ရှိလည်းလုပ်​​ကိုင်ေ​နတဲ့ Professionals ​တွေနဲ့​တွေ့ဆုံခွင့်​ရ​အောင်​စီစဉ်​​ပေးထားတဲ့ပွဲ​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ကျောင်းပြီးသွားလို့ လုပ်​ငန်းခွင်​ဝင်​တဲ့အခါ ကြိုတင်​သိထားရမှာ​တွေ ပြင်​ဆင်​ထားရမှာ​တွေကို​လေ့လာခွင့်​ရမှာဖြစ်​ပြီး company ​တွေရဲ့လည်​ပတ်​ပုံ​တွေကိုပါ သိရှိ​လေ့လာရမှာပါ။ဒီပွဲမှာဆ်ိုရင်​ company ​တွေကို ကိုယ်​တိုင်​​လေ့လာနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​​ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ လုပ်​ငန်းခွင်​ဝင်​တဲ့အခါ အဆင်​သင့်​ဖြစ်​​နေ​အောင်​ သိသင့်​သိထိုက်​တာ​တွေ ပြင်​ဆင်​ထားရမှာ​တွေကို ​လေ့လာခွင့်​ရမှာပါ။ဒါ့အပြင်​ Company ကြီး​တွေမှာ ဘယ်​လိုလည်​ပတ်​​နေတယ်​ဆိုတာ​တွေကို ကိုယ်​တိုင်​ကိုယ်​ကျ ထိ​တွေ့​လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​လက်​မလွှတ်​သင့်​တဲ့ အခွင့်​အ​ရေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီပှဲ​လေးက​ မွနျ​မာနိုငျ​ငံမှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျ​​ကြောငျးသား/သူ​တှနေဲ့ စီးပှား​ရေးလုပျ​ငနျးခှငျ​က လုပျ​ငနျး​​အ​တှအေ့ကွုံရှိတဲ့ လကျ​ရှိလညျးလုပျ​​ကိုငျေ​နတဲ့ Professionals ​တှနေဲ့​တှဆေုံ့ခှငျ့​ရ​အောငျ​စီစဉျ​​ပေးထားတဲ့ပှဲ​လေးပဲဖွဈ​ပါတယျ​။ ​ကြောငျးပွီးသှားလို့ လုပျ​ငနျးခှငျ​ဝငျ​တဲ့အခါ ကွိုတငျ​သိထားရမှာ​တှေ ပွငျ​ဆငျ​ထားရမှာ​တှကေို​လလေ့ာခှငျ့​ရမှာဖွဈ​ပွီး company ​တှရေဲ့လညျ​ပတျ​ပုံ​တှကေိုပါ သိရှိ​လလေ့ာရမှာပါ။ဒီပှဲမှာဆျိုရငျ​ company ​တှကေို ကိုယျ​တိုငျ​​လလေ့ာနိုငျ​မှာဖွဈ​ပါတယျ​​ကြောငျးပွီးသှားတဲ့အခါ လုပျ​ငနျးခှငျ​ဝငျ​တဲ့အခါ အဆငျ​သငျ့​ဖွဈ​​နေ​အောငျ​ သိသငျ့​သိထိုကျ​တာ​တှေ ပွငျ​ဆငျ​ထားရမှာ​တှကေို ​လလေ့ာခှငျ့​ရမှာပါ။ဒါ့အပွငျ​ Company ကွီး​တှမှော ဘယျ​လိုလညျ​ပတျ​​နတေယျ​ဆိုတာ​တှကေို ကိုယျ​တိုငျ​ကိုယျ​ကြ ထိ​တှေ့​လလေ့ာခှငျ့ရမှာဖွဈ​ပါတယျ​။ ဒါ့​ကွောငျ့​လကျ​မလှတျ​သငျ့​တဲ့ အခှငျ့​အ​ရေးပဲဖွဈ​ပါတယျ​။